Sayardaw Archives - Tameelay
August 12, 2020 by daddy
ကံမကောင်းဘူးဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ဘာလုပ်ရမှာလဲ…. မကောင်းတဲ့ကံ တွေ ပပျောက်အောင် ကံကောင်းတဲ့နည်းတွေ မရှိဘူးလားဆို၊ ရှိတယ်။ အကုသိုလ် အကျိုးတွေ ဝင်ရောက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကို လူတွေက ကံမကောင်းဘူးလို့ပြောတာ။ အကုသိုလ်ရဲ့ အကျိုးတရား တွေက ကိုယ့်သန္တာန် ရောက်ပြီ၊ ထိခိုက်နေပြီဆိုရင်… ဒါက ကံမကောင်းဘူးလို့ ပြောကြတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ရပ်ကို ပြန်ဆန်းစစ် ကြည့်ရမယ်။ ငါတို့လုပ်နေတာ အမှားမရှိဘူး၊ အကောင်း တွေလုပ်တယ်။ သို့သော် အတိတ်တုန်းက မှားယွင်းမှုတွေကလည်း လူတွေရဲ့သန္တာန် လာရောက်ပြီး အကျိုးပေး နေတာတွေ ရှိတတ်တယ်ပေါ့။ အဲဒီလို ဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးတွေ ကော မရှိနိုင်ဘူးလားဆို ရှိနိုင်တယ်။ ရှိလာလို့ရှိရင် ဘာနဲ့အကာအကွယ်လုပ်ရမလဲလို့ ဆိုရင် ကံကောင်းအောင် ကောင်းတဲ့ကံတရား တွေကို ကြိုးစားပြီး လုပ်ရမယ်။ ဘုရားကို အာရုံပြုမယ်၊ သံဃာကို … Read more
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 12, Sayardaw
အေး … ဝမ်းသာခြင်းက အသက်ရှည်ဆေးပဲ။အလှူဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဝမ်းသာခြင်းကိုပြောတာက ဒါနိဒါန်းလောက်ပဲ ပြောတာ။ အားလုံး သူတော်ကောင်းတွေ တကယ်ကျင့်ဖို့ကတော့အကုသိုလ်နဲ့ မပတ်သက်ခဲ့ရင်, ကုသိုလ်တရားနဲ့ ပတ်သက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်,အကျင့်ကောင်းနဲ့ သက်ဆိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဘယ်အခါမျိုးမှာမဆို (ပရိသတ်ကြီးရေ …)ဝမ်းသာနိုင်အောင် ကြိုးစား။ ဝမ်းသာခြင်းက အသက်ရှည်ဆေးပဲ၊ ဟုတ်လား။ လူ့ဘဝဆိုတာ နှစ်ပေါင်း ခုနှစ်ဆယ်,ရှစ်ဆယ်နော်။ အလွန်တရာ တိုတောင်းတဲ့ နှစ်ကာလအတွင်းမှာ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေကြရမှ ရောဂါကင်းမယ်၊ ရောဂါကင်းတယ်။ ပြောင်းပြန် ဆန့်ကျင်ဘက်စဉ်းစားကြည့် ….အမြဲတမ်း သောကတွေရောက် စိတ်ညစ်နေလို့ရှိရင် (ပရိသတ်ကြီးရေ …)ထင်ရှားတယ်နော်။ ရောဂါအမျိုးမျိုး ခဏလေးဝင်မယ်။ တစ်ခုခုကို အကြောင်းပြုပြီးစိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာ ဆရာဝန်နဲ့ သွားပြီးတော့ သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းကြည့်ပါလား၊တက်နေလိမ့်မယ်။ ၁၆၀၊ ၁၇၀၊ ၁၈၀ နော်။ အဲဒါကြောင့် နှလုံးရောဂါ၊ သွေးတိုးရောဂါ၊ဆီးချိုရောဂါ စတဲ့ အတွင်းကျတဲ့ … Read more
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 24, Sayardaw
July 17, 2020 by daddy
အားမငယ်နဲ့ ဘယ်သူရှိရှိ မရှိရှိ ကိုယ့်အနားမှာ ကိုယ်ရှိနေတာပဲလေ အားငယ်မနေပါနဲ့။ ဘယ်သူသိသိ မသိသိ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သိနေတာပဲလေ အားငယ်မနေပါနဲ့။ ဘယ်သူအားပေးပေး မပေးပေး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပဲ အားပေးရမှာပဲလေ အားငယ်မနေပါနဲ့။ ဘယ်သူထောက်ခံခံ မခံခံကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပဲ ထောက်ခံရမှာပဲလေ အားငယ်မနေပါနဲ့။ ဘယ်သူဆပ်ဆပ် မဆပ်ဆပ်ကိုယ့်အကြွေးတော့ ကိုယ်ဆပ်ရမှာပဲလေ အားငယ်မနေပါနဲ့။ ဘယ်သူလုပ်လုပ် မလုပ်လုပ် ကိုယ့်အတွက်တော့ ကိုယ်လုပ်ရမှာပဲလေ။ အားငယ်မနေပါနဲ့။ အရင်းစစ်တော့ ကိုယ်သာလျှင် ကိုးကွယ်ရာအစစ် ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ၊ ကိုယ်ကောင်းကိုယ်စံ ကိုယ်မှားကိုယ်ပြင်၊ ကိုယ်လဲကိုယ်ထ အားလုံးဟာ ကိုယ်သာပဓာနပါပဲ။ ဘာမှ အားငယ်မနေပါနဲ့။ ကိုယ့်အတွက်က ကိုယ်ရှိပြီးသားပဲလေ။ မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ အားမငယ္နဲ႕ ဘယ္သူရွိရွိ မရွိရွိ ကိုယ့္အနားမွာ ကိုယ္ရွိေနတာပဲေလ အားငယ္မေနပါနဲ႕။ ဘယ္သူသိသိ မသိသိ ကိုယ့္ဘာသာကိုယ္ သိေနတာပဲေလ အားငယ္မေနပါနဲ႕။ … Read more
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 17, Sayardaw
ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်စစ် စိတ်မညစ်ပါစေနဲ့။ စိတ်ဆိုးတာက ဒေါသအသေးစား၊စိတ်ကောက်တာက ဒေါသအလတ်စား၊စိတ်နာတာက ဒေါသအကြီးစား။ဘယ်ဒေါသမှ မကောင်းဘူး။ အဆိုးဆုံးက စိတ်နာတာပဲ။စိတ်ဆိုးတာက ခဏလေးပြေတယ်။စိတ်ကောက်တာက ချော့ရင်ပြေတယ်။ စိတ်နာတာကျတော့ ပြေဖို့မလွယ်သလိုသံသရာနဲ့ချီပြီးတော့ကို ဒီအနာကမပျောက်ဘဲ ဖြစ်တတ်တယ်။ ကိုယ်ကသူများကို ..စိတ်နာရရင်လည်း မကောင်းဘူး၊သူများက ကိုယ့်ကို …စိတ်နာသွားရင်လည်း မကောင်းဘူး။ ဘယ်သူက ဘယ်သူကြောင့်ပဲ နာနာစိတ်အနာဟာ ပူလောင်မှုနဲ့နာကျင်မှုကိုပဲ ဖြစ်စေတယ်။စိတ်နာပစ်လိုက်လို့ငြိမ်းချမ်းသွားမှာတော့ မဟုတ်ဘူး။သံသရာရှည်ဖို့ပဲ ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်လောကအနာတွေထဲမှာစိတ်နာတာက အဆိုးဆုံးပဲ ဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်နာအောင်လည်း မလုပ်နဲ့၊စိတ်လည်း မနာမိစေနဲ့။ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်စစ် စိတ်မညစ်ပါစေနဲ့။ မေတ္တာဖြင့် မနာပဒါယီ အရှင်ဝိစိတ္တ(ခတ်တေ ကိုရီးယား) ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ဆုံးမခြင်း (၇၀) ဘာကြောင့် စိတ်ညစ်ရသလဲ? “ဘုန်းဘုန်းဘုရား တပည့်တော် စိတ်အရမ်းညစ်နေလို့၊ အဲဒါတရားစကားလေး မိန့်ပေးပါဘုရား”ဆိုပြီး တပည့်မလေးတစ်ယောက်က လျှောက်ပါတယ်။ “ဘာကြောင့် စိတ်ညစ်တာလဲ”ဆိုတော့ “တပည့်တော်အထက် အရာရှိကြောင့်ပါဘုရား”လို့ အဖြေပေးရင်း … Read more
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 03, Sayardaw
ဓမ္မဒူတ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ မှ ဖားကန့်ဒေသ ဝှေခါမှော် မြေပြိုမှု ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ကျပ်သိန်း ၁၀၀ ကျပ်လှူဒါန်း
July 2, 2020 by Tameelay
ဓမ္မဒူတ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ မှ ဖားကန့်ဒေသ ဝှေခါမှော် မြေပြိုမှု ဖြစ်စဥ် နှင့် စပ်လျှင်း ၍ ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများ ၊လူနာများအား ဖားကန့် — မြစ်ကြီးနား — မန္တလေး သို့ သယ်ဆောင်ရွှေ့ပြောင်းခြင်း လုပ်ငန်းများ အား ချက်ချင်း တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် အလှူတော်ငွေ ကျပ်သိန်းတစ်ရာ အား မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ (ဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယ ဥက္ကဌ)ဦးလှိုင်မင်းဦး ထံ သို့ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆရာတော်ဘုရား ၏ အမိန့်အရလိုအပ်ချက်များအား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ လူမှုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့(မန္တလေးတိုင်းရုံး) မှဗဟိုကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဌဦးလှိုင်မင်းဦး ခေါင်းဆောင်သော ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များ ၊လူနာသယ်ဆောင်မည့် အရေးပေါ် လူနာတင်ယာဥ်များ၊ ရုပ်အလောင်းသယ်ဆောင်မည့် မော်တော်ယာဥ်များ ယနေ့ည ဆက်လက် … Read more
Categories Buddha Words and Knowledge Tags 02, Sayardaw